मित्रतामा ध्यान दिऔं
classickhabar २०७५ बैशाख २७ बिहीबार प्रकाशित
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणबारे अनेक कुराहरु आउन थालेका छन् । कतिले यसलाई उपलब्धी मानेका छन् भने कतिले लम्पसारवाद पनि भनेका छन् । जसले जे भनेपनि विश्वमा महत्वपूर्ण स्थान बनाएको एउटा देशको प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदैछन्, यसलाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने पनि भारतलाई चिढाएर नेपालले प्रगती गर्न सक्दैन भन्ने विज्ञहरु छन् । प्रत्यक्ष रुपमा सीमा जोडिएका कारण पनि भारतले नेपालाई गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणले यहाँको विकासमा असर पुग्नु स्वाभाविक हो । यसले गर्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु जरुरी छ ।
भारतीय पक्षबाट सीमा मिचियो । सीमाक्षेत्रका नागरीक कुटिए भन्ने कुरा अब सामान्य हुन थालिसक्यो । यस्ता घटनाहरु भइरहन्छन् । तर नेपालको बागडोर सम्हाल्ने उच्च ओहोदाका बाट अहिलेसम्म यस्ता विषयमा उताका उच्च ओहोदाका व्यक्तिसँग कुरा गर्न सकेका छैनन् । जनता कराउँछन्, सामाजिक सञ्जालमा रिस पोख्छन् । कुरा यति मै सिमित छ ।
सकसपूर्ण नाकाबन्दी नेपाली बिर्सने कुरा त भएन । नाकाबन्दी लगाउन नेपालीले नै साथ दिएका थिए भन्ने तितो यथार्थ पनि बिर्सनु भएन । त्यसैले अब देशले विकास गर्नु छ भने विरोध होइन । राम्रो कुराको समर्थन गरौं ।
गाई सरी साधु जो जो यहाँ जगतमा !
सबको शरण बलियो जंगी निशान हाम्रो !!
यो मुल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरौं । मित्रतामा ध्यान दिऔं ।